ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းပေါ်တွင် ဆိုင်ကယ် တက်ရောက်မောင်းနှင်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ (၈၉)ဦး ရှိ
ခရီးသြား , June 29, 2020
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလအထိ ဆိုင်ကယ် တက်ရောက်မောင်းနှင်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ (၈၉)ဦး ရှိ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် တက်ရောက်မောင်းနှင်မှုကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလ...
ခရီးသြား , June 27, 2020
ပုဂံရှေးဟောင်းဒေသတွင်သာ တွေ့ရှိနိုင်သည့် ဒေသရင်း ငှက်မျိုးစိတ် ခုနစ်မျိုးအား ကာကွယ်ထား ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်း၌သာ တွေ့ရှိရပြီး ပုဂံရှေးဟောင်းဒေသတွင် ပေါက်ဖွားရှင်သန်နေထိုင်လျက်ရှိသည့် မြန်မာ့ဒေသရင်း ရှားပါးငှက်မျိုးစိတ် ခုနစ်မျိုးအား ဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်မှုများ မရှိစေရန် အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း...
ခရီးသြား , June 25, 2020
မကွေး-ကျောက်ဖြူ အမြန်ရထားလမ်းသစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ဆွေးနွေး ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးညီပုနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအား မကွေး-ကျောက်ဖြူ အမြန်ရထား လမ်းသစ်(Express Standard Gauge Railway 160km – 22km per hr)ဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်...
Covid ကြောင့် စျေးကွက်ကျဆင်းပြီး အိန္ဒိယမှာ စတော်ဗယ်ရီသီးတွေကို နွားကျွေးပစ်ခဲ့ရ
Covid ဒဏ် လယ်သမားတွေလည်းခံစားရပါတယ်။ 🇮🇳 အိန္ဒိယက လယ်သမားကြီး Anuj Agrawal ဟာ သူ့လယ်ဧက 50 မှာစိုက်ထားတဲ့ သင်္ဘောနဲ့ ငှက်ပျောပင်တွေကို လယ်ထွန်စက်နဲ့တက်ကြိတ်ပစ်နေပါပြီ။ ပုံမှန်က အပင်တွေကို မေလမှာအပြီးစိုက်ပြီး ဒီဇင်ဘာကနေ ဧပြီလအထိအသီးခူးကာ စျေးကွက်ကို...
၂၃-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ
ခရီးသြား , June 23, 2020
( ၂၂-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ
ခရီးသြား , June 22, 2020
( ၂၂-၆-၂၀၂၀ ) ရက်နေ. ရန်ကုန်၊မန္တလေး ရွှေဈေးနှုန်းများ တစ်ကျပ်သားရောင်းဈေးများဖြစ်ပါသည်။
လယ်သမားများအတွက် ယခုနှစ် မိုးစပါးချေးငွေ (၁)ဧက နှစ်သိန်းကျပ်နှုန်းရရှိမည်
ခရီးသြား , June 21, 2020
လယ်သမားများအတွက် ယခုနှစ် မိုးစပါးချေးငွေ (၁)ဧက နှစ်သိန်းကျပ်နှုန်းရရှိမည် လယ်သမားများအတွက် ယခုနှစ် မိုးစပါးချေးငွေကို ၁ဧက ၂သိန်းကျပ်နှုန်းဖြင့်ထုတ်ချေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှသိရသည်။ ယခင်က ချေးငွေကို ၁ဧကလျှင် ကျပ်၁၅၀၀၀၀နှုန်းသာ ထုတ်ချေးပေးခဲ့သော်လည်း ယခု ကိုဗစ်ကြောင့် ယခင်ကထက်...
လမ်းဂိတ်၂၄ ခုနှင့် တံတား ၆၂ ခု တို့နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ အသုံးပြုခ တဝက်လျှော့ချထား
လမ်းဂိတ်၂၄ ခုနှင့် တံတား ၆၂ ခု တို့နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်အထိ အသုံးပြုခ တဝက်လျှော့ချထား COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် နိုင်ငံတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အထောက်အ ကူဖြစ်စေရန် လမ်း၊ တံတား...
ခရီးသြား , June 17, 2020
ဆင်စီးပြီး တောတောင်သဘာဝရှုခင်းများ လေ့လာနိုင်မည့် ခရီးစဉ်သစ်များ ဖော်ထုတ်ပြင်ဆင်နေ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါအခြေအနေ တည်ငြိမ်၍ အပန်းဖြေစခန်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသည့်ကာလတွင် မန္တလေးမြို့နှင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကြား ရဲရွာရေလှောင်တမံသွား ကားလမ်းဘေးတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် ဝါးနက်နှင့် ဒီးဒုတ် ဆင်စီးအပန်းဖြေစခန်းများမှ မတူညီသောဝန်ဆောင်မှုသစ်များဖြင့် ခရီးသွားများအား...
၁၇-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ. နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းများ